सुदूर दुर्गमको हेल्थपोष्ट हाँ’किरहेकी २१ बर्षिय सुन्दर निर्मलाका यस्ता छन् भु’ल्नै नसक्ने पि’डा ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठमुख्य खबर शिक्षा/स्वास्थसुदूर दुर्गमको हेल्थपोष्ट हाँ’किरहेकी २१ बर्षिय सुन्दर निर्मलाका यस्ता छन् भु’ल्नै नसक्ने पि’डा !
सुदूर दुर्गमको हेल्थपोष्ट हाँ’किरहेकी २१ बर्षिय सुन्दर निर्मलाका यस्ता छन् भु’ल्नै नसक्ने पि’डा !
Sudur Samaj | Wednesday October 14, 2020	Comments
हेल्थआवाज / सुदुर समाज निर्मला जोशी हेल्थ पोष्टको नेतृत्व गर्ने गरी बैतडीको डिलासैनी— ५ पुगेकी थिइन् । त्यतिबेला उनी केवल २१ वर्षकी मात्रै थिइन् । भर्खरै लोकसेवा पास गरेर स्थायी भएकी उनले त्यसअघि केही महिना स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी उपचारको अनुभव बटुलेकी थिइन् । तर, हेल्थ पोष्टका अन्य प्रशासनिकलगायत सबै जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको पहिलो पटक थियो । बैतडीका ६८ वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये महिलाहरुले मात्रै हाँकेको स्वास्थ्य चौकी त्यही एक हो । निर्मलासहित यो हेल्थ पोष्टमा काम गर्ने अहेब निर्मला नाथ, अनमीहरु नारायणी जोशी, पदमा चन्द र ललिता जोशी सबै महिला छन् भने वडा नं. ६ को वर्थिङ सेन्टरमा अनमीहरु गीता साउँद र आरती नाथ कार्यरत छन् । ***थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,** **
सुरुमा चिनेजानेका सिनियर र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयका सरहरुको सहयोगमा प्रशासनिक कामहरु गरे,’ उनी भन्छिन् । कतिसम्म भने सुरुमा पुराना लेटरको फरम्याट हेरेर पनि कतिपय कामहरु उनले गरिन् । स्थानीय र अनमीका रुपमा उनकी आमाले समेत काम गरेका कारण धेरै स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरुले उनलाई सुरुवाती समयमा कार्यसम्पादनमा सहयोग गरे । नयाँ सिक्ने, राम्रो गर्ने सोचकी निर्मला झण्डै तीन वर्षदेखि त्यही स्वास्थ्य चौकीको प्रमुखका रुपमा सक्रिय छन् । सुदुर समाजको लागी साभार हेल्थआवाजबाट